November, 2018 | Otu Di na Nwunye
November 28, 2018 + Nyocha, Njem Gear
Tags kacha mma
Ịchọta mkpado ngwanrọ kachasị mma na akụrụngwa akpa kachasị mma bụ n'ezie maka ịme ihe na inwe ike ngwa ngwa ịmata akpa gị dị ka ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. N'ezie, ị chọrọ ihe dị mma, ma ịchọrọkwa ihe na-eme ka akpa gị pụta mgbe ọ na-agafe na eriri, ma ọ bụ nọdụ na ìgwè ndị ọzọ akpa na-eme ka ... GỤKWUO
November 19, 2018 + ụlọ, Europe, Hotels, Spain, Nhazi njem
Madrid bụ otu n'ime ebe dị egwu na nke ọdịbendị mmadụ nwere ike ịga leta; obodo ahụ na-ama ọmarịcha ebe obibi mara mma, ịma mma nke na-akpali akpali na-eme ka ndị mmadụ na - eleta - ma ebee ka ị ga - anọ? N'ezie, obodo ahụ buru ibu na otu n'ime obi abụọ mbụ nke na-abata n'uche mgbe ị na-eme atụmatụ njem ahụ bụ ebe obibi ahụ. Map - Madrid si ... GỤKWUO
November 17, 2018 + Europe, France, French, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka
Bresse Chicken na ude Nri Nri
Bresse Chicken in Cream Achịcha bụ nri na-edozi nri nri French, bụ nke onye ụkọ akụkọ ihe mere eme bụ Paul Bocuse mara ama. Otú ọ dị, n'adịghị ọtụtụ akwụkwọ ntụziaka French site na ụlọ akwụkwọ La Mere Brazier na Bocuse, ọ bụ uzommeputa nke na-agaghị ekwe omume ịchụpụ n'ụlọ, ma ọ dịghị ebighi ebi. Ọ bụ mpaghara na efere, mere nke ọma na ezi ulo ozuzu okuko si Bresse mpaghara France - ... GỤKWUO